Yekumhanyisa bvunzo pakati peIOS 15 uye iOS 14.6 | IPhone nhau
Yekumhanyisa bvunzo pakati peiyo iOS 15 uye iOS 14.6
Mushure mekupera kweWWDC 2021, sezvakarongwa, Apple yakaburitsa iyo iOS 15 yekutanga beta, vhezheni itsva yeIOS iyo inotipa nhau dzinonakidza, kunyangwe kune vashandisi vazhinji ivo vasina kukwana, kunyanya mushanduro yeiyo iPad, nekuti haitenderi kuwana simba rese reiyo nyowani iPad Pro 2021 ine M1 processor.
Nokuburitswa kweshanduro nyowani yeIOS, yaive nyaya yenguva vakomana vepaAppleBytes vasati vaita cKuenzanisa kwekuita pakati pekutanga beta yeIOS 15 uye yazvino vhezheni iyo Apple inoenderera kusaina nhasi, iOS 14.6. Tichifunga nezve kuti ese mairi iPhone 6s uye iyo iPad Mhepo 2 yakagadziridzwa, mashandiro emaviri madhizaini ndeye chero munhu anofungidzira.
Incognito inojekeswa muvhidhiyo iyi, sezvo vakomana vanobva kuAppleBytes vaita bvunzo iyi pane akasiyana madhijitari, kusanganisira iwo anga ari pamusika kwenguva refu seyizvarwa chekutanga iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 7 ...
Kana iwe waona vhidhiyo, uye kana zvisiri ndinokuudza, kunyangwe iOS 15 iri mune yekutanga beta mashandiro ainopa akafanana chaizvo nezvatinogona kuwana neIOS 14.6. Chaizvoizvo mutsauko chete mukuita unowanikwa munguva inotora kune yega modhi kutanga.
Sezvo Apple inoburitsa mabheji matsva, mikana ndeyekuti iOS 15 mashandiro anoramba achivandudza kuve wakakwira kupfuura iOS 14.6. Chero bedzi iyo iPhone 6s ichiramba ichishanda senguva dzose neiyo inotevera vhezheni yeIOS, vashandisi veaya madhizaini vachanyanya kufara, sezvo vachizokwanisa kuenderera vachishandisa chishandiso chine makore anodarika matanhatu pamusika.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 14 » Yekumhanyisa bvunzo pakati peiyo iOS 15 uye iOS 14.6
Apple inotiratidza maitiro ekubvisa "spam" kubva pakarenda
Nyowani firmware yakaburitsirwa AirPods Max